[WEEDHA WARGEYSKA:-] Guddi Boggaadin Mutaystay
Wednesday 16th September 2020 07:40:21 in Wararkii Maanta by Madaxa Wararka
Hargeysa (Karin News) Mar kale, ayaa yididiilladii umaddu kobocday, xafiiska qandaraasyadda qarankuna
Hargeysa (Karin News) Mar kale, ayaa yididiilladii umaddu kobocday, xafiiska qandaraasyadda qarankuna ugu yaraan wuxuu kor u qaaday rajadda shacbigu ka qabay in la qaado talbooyin ku salaysan caddaalad iyo horusocod-nimo. Iska caashaq maaha iyo amaan meel weyday’e, waxaa la isu saaray Qalinka iyo tawaadda inaynu dhiiri gelin iyo boggaadin uga dhigno hay’addan qaran talaabooyinka wanaagsan ee ay waddo.
Inagga oo aan foggaan, waxaa la yidhi, Beennaalle markhaatigiisa ayuu foggeeyaaye, waxaa aynu marag ahaan u xusaynaa todobaadkan ugu danbeeyay waa 8 September 2020. Waxaa Guddigu shaacisay qandaraasyo ay ka qaybgalleen tartarkoodda ilaa 115 shirkaddood, kuwaas oo 10 ka mid ahi ku guulaysteen fullinta qandaraasyaddii la naadiyay ee warbaahintu tebisay.
‘Qaylo kama yeedhin’ oo boqol iyo dheeraadkii shirkadood ee doorkan ka hadhay ma ay caban, waxaana ay boggaadiyeen, isla markaana ammaan u soo jeediyeen guddida qandaraasyada qaranka oo ay ku majeerteen hannaanka caddaaladeed ee ay ugu garsooreen tartamayaasha iyo sida daah-furnaanta ah ee ay umadda ugu adeegaan, sidoo kalena waxay u haneeyeen saaxiibadooda guuleystay.
Sababta oo ah waxaa ay darreensan yihiin oo ban-yaal ahaa qaabka loo maamulayo hawsha. Hadda, garo oo waxaa laga hadlayaa waa nidaam u dhisan sida garsoorka oo had iyo jeer aan laga waayin cabatin iyo waa la’iga eexday.
Haaheey, hore ayaa waxaa loo yidhi "Gari laba nin kama wadda qosliso’ oo mar kasta dhinacii wax laga xukumay ayaa isu arka in la duudsiyay si kasta oo loo cadeeyo garnaqaas sidaas oo ay tahay bandhigan qandaraasyadda ah iyo kuwii ka horeeyay ba waxaa ka qayb-galayaasha u diiday cabashaddu waa daah-furnaanta iyo kalsoonnida ay qabaan oo qaarkood hore u guulaysteen, hadda ka dibna filayaan inay guulaystaan.
Marka aynu sidan u dhigayno ee hanbalyaynayno guddiga qandaraasyadda, macnaheeddu ma’aha inay is dhigtaan oo u fahmaan in ay gaadheen figtii ugu saraysay, laakiin, waxaan uga jeednaa ta koowaad inay oggaadaan in shacabkoodda iyo qarankoodduba og-yahay talaabo kasta oo ay u qaadaan dhinaca wanaagsan, sidaas darteedna la rabo inay ku sii dhiiradaan oo hore ugu marraan dhabaha ay hayaan ee wanaagsan.
Ta labaad waa inaynu caddayno in caddaaladu tahay sirta nolosha qurxoon iyo badhaadhaha ifka ummadi ku gaadho. Waa astaanta iyo furaha guusha iyo jidka loo marro xasilloonida. Waxaa ay furtaa albaabada rajada, waxaana ay ka hortagtaa quusta iyo niyad jabka. Waxay abuurtaa qaran qofkiisu isku kalsoon yahay, dalkiisa ku kalsoon yahay oo ahaanshiisa iskula weyn.
Islamarkaana aaminsan in hoggaankiisu yahay mid ku haboon oo Qarankan gaadhsiin karra himilooyin wacan. Halka caddaalad darradu ka soo horjeeddo kana dhasho cadaawad saameysa cid kasta dadweynaha ku abuurto cabsi. Waxaan raacinaynaa intaas oo affeef ahaan u dhiganaynaa, Xaasha;e, Hay’adda qandaraasyadda qaranka ma jiro jacayl gaar ah oo aynu u qabno oo kagga xullanay laamaha kale ee dawladda.
Gabagabadiina waxaa aynu u raacinaynaa, farriinta boggaadin kasta oo aan hawadda saraakiisha gacanta ku haysaay idiin soo marrinno, waxaa ka weyn ficilka aad muujinaysaan oo laga dheehan doonno wax qabadkiina ama wax qabad la’aantiina.
Haa waan ku celinayaa waxaa midho-dhalka hay’ada ama midho-dhal la’aanteedu ku xidhantahay taariikhduna ku diiwaan gelin doontaa turjumaadda ka dhallata dhaqanka maareyntiina hawleed sababtoo ah hawl-qabadkaagu wuxuu leeyahay fal-celis la mid ah wanaag iyo wanaag la’aan. waxaa mar walba idin daba-taagan, xigmad-tidhaahda ‘Nin la tumay bay talo joogtaa.”
Guddoomiyaha Guddida Qandaraasyada Qaranka oo ka Hadlay Maamul Daadejinta Xafiiskiisa ee Heer Gobol [Gudaha Ka Aakhriso
[Top Secret:-] Xubin Ka Mid Ah Guddiga Qaban-Qaabada Shirweynaha Kulmiye Oo Sheegay In Saylici & Saajin Tartamayaan,
Guddi 11 Xubnood Ah Oo Loosaaray Tabashada Xildhibaano Hore U Qaadacay Xeerka Doorashoyinka Somaliland [Muuqaa ]
Guddida Qaban-qaabada Shirka KULMIYE Oo Fariin U Diray Ergooyinka Shirweynha 4aad Iyo Arrimaha Taagan [ Muuqaal]
[Akhriso:-] Guddida Qandaraasyada Qaranka Oo Baahinaya Mashaariic Laga Fulinaayo Gobolada Dalka Iyo Gaadidd Ambulance Ah
[DEG DEG:-] Guddidii Doorashada Oo War Cusub Iminka Ku Dhawaaqay Iyo Saddexdii Xisbi Qaran Oo Aqbaly